Digniin ku wajahan qaswadayaasha - BBC Somali
Digniin ku wajahan qaswadayaasha
1 Maajo 2012
Image caption Jooji
Iyada oo lagu jiro xilli ay gabagabo ku dhowdahay ka gudbidda xilliga ku meel gaarka ah ayaa Qaramada Midoobay, urur-goboleedka IGAD iyo Midowga Africa waxay wadajir u soo saareen digniin ku wajahan cid kasta oo isku dayda in ay is-hortaagto hannaanka siyaasaddeed ee Soomaliyu.
Ergeyga xoghayaha guud ee QM u qaabbilsan Soomaaliya, Danjire Augustine Mahiga, wakiilka Midowga Afrika ugu xilsaaran Soomaaliya, Boubacar Diarra iyo Kipruto arab Kirwa oo ah ergeyga IGAD ee Soomaaliya ayaa waraaq ay wadajir u soo saareen si xoog leh uga digay is-hortaagidda ama baajinta hawlaha ay Soomaalidu damacsan tahay in ay ku dhisato he'ado dowladeed oo cusub ugu dambeyn bisha August.
Waxaa hadda soo dhowaaday, ayay yiraahdeen, waqtigii loogu tala galay ansixinta dastuurka iyo xulidda xubnaha barlamaanka cusub, waxayna walaac ka muujiyeen shakhsiyaad iyo kooxo dalka gudihiisa iyo dibaddisaba oo ay ku tilmaameen in ay isku dayayaan in ay carqaladeeyaan hawlaha socda.
Waxay masuuliyiintaas ku sheegeen qoraalkooda in ay ciddii ka waantoobi wayda carqaladeynta loo gudbin doono golaha Wasiirdada ee IGAD oo ka qaadi doona tallaabo cad oo lagu xakameynayo.
Isla markaasna waxaa dhici karta in isla markaas loo gudbiyo kooxda Qaramada Midoobay u qaabbilsan la socodka Somalia iyo Eritrea, si loogu sameeyo baaritaan ku qotoma nidaamka Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Intaa waxay ku dareen mas'uuliyiintani in ay hawshaas ku dhaqaaqi doonaan toddobaadkayada soo socda.
Warkan qoraalka ah ee ka soo baxay QM, Midowga Afrika iyo IGAD waxaa lagu xusay in loo baahan yahay in loo arko digniin iyo isla markaa in ay fursaddii ugu dambeysay ay ka dhigtaan kuwa ka soo horjeeda nabadda iyo horumarka Somalia oo sida ugu dhakhaha badan uga waantoobaan ugana fogaadaan fal kasta oo ka soo horjeeda tubta kala guurka ee Somalia.